NOOCYADA UGU WAAWEYN EE KALANCHOE, SHARAXAAD IYO SAWIR - DHIRTA GUDAHA
Kalanchoe waa geedka dilka ah ee qoyska colossae, kaas oo u yimid Yurub ka soo qulqulka roobka ee Asia, America iyo Australia. Dhowaan, waxay bilaabeen in ay jajabiyaan sida guri, oo ku faraxsan kala duwanaanta.
Noocyada Kalanchoe waxaa ku jira in ka badan 200 oo magac, ma tirin noocyo iyo Beelaha.
Warshadkan waxaa loo tixgeliyaa goolhayaha maqaarka. Waxay ka soo baxdaa tamar aan fiicneyn oo suntan khilaafka qoyska dhexdiisa. Waxaa la ogaaday in guriga ee ubax nadiif ah hawada ka nijaaro waxyeelo leh. Intaa waxaa dheer, ku dhawaad ​​dhammaan noocyada Kalanchoe waa daawo.
Deegaanka dabiiciga ah Behara Kalanchoe caadi ah oo ku yaalla Koonfur Asiya iyo Madagascar. Geedka, dhuuban iyo khafiif ah, waxay ku koraan ilaa 40 cm Caleemaha waa saddex xagal oo qaabab dijitaal ah oo macquul ah ayaa sidoo kale loo yaqaan 'pubescent'. Midabka caleemaha waa saytuun.
Geedka ubaxyada ee June-July oo leh ubax yar oo midabka cirro leh oo jilicsan. Dabeecadda Kalanchoe waa in marar badan la gooyaa, caleemuhu waxay ugu dambeyn ku sii jirtaa oo kaliya meesha sare. Gacan iyo googoyn.
Waa muhiim! Is-daaweynta dhirta iyada oo aan aqoonin qiyaasta iyo iyada oo aan la tashan dhakhtar waxay kicin kartaa nabarro, shuban, xasaasiyad iyo cirib culus.
Wadanka Calaghnea Blossfelda, ama Kalanchoe cad, sida lagu dhawaaqo, waa Madagascar. Waxaa jira xaaladaha dabiiciga ah ee duurka u gaaro hal mitir iyo mitir badhkeed. Caleemaha qaabka ukumaha ah waxay leeyihiin midab madow oo leh cidhifyo casaan leh. In dabiiciga ah, waxaa la Blooms oo leh burooyinkoodii cad laga bilaabo February ilaa May.
Breeders bred badan oo kala duwan ee warshad this leh midab kala duwan oo ubax: huruud ah, oranji, casaan iyo caddaan. Xaaladaha qolka, waxay koraa ilaa 30 cm, caleemaha waa isku mid ah qaabka sida qaraabada duurjoogta ah, laakiin cagaaran iftiin. Taageerayaasha ubaxa waxay doorbidaan Kalanchoe oo leh ubax casaan ah.
Aragtidani waxay leedahay magac kale - maqaarka bisil. Magaca dhirta ayaa loo helaa qaabka caleemaha: qulqulaya, naqshadeeyaha foornada cad, oo leh jajabta cidhifyada, bunni.
Guriga, Kalanchoe wuxuu koraa ilaa 30 cm, marar dhoobo ah, laakiin haddii uu blooms, ka dibna dallad inflorescence ee ubax-casaan cas.
Gobollada Afrika Kalanchoe Degremona wuxuu koraa nus mitir, wuxuu dareensan yahay meel adag oo qallalan iyo dhul qallalan.
Caleemaha waa weyn ee qaabka ellipse, waxoogaa yaraaday oo xaruntii. Midabka caleemaha ma aha mid isku mid ah: dhinaca dushiisa waa cagaar-cagaaran, dhinaca gudaha waxay ku yaallaan finan yaryar. Inflorescences qaab muuqaal ah, Bloom xilliga jiilaalka.
Noocani waa mid ku habboon taranta guriga: caruurta ku yaala cidhifyada caleemaha si dhakhso ah ayey u qaataan xidid iyo horumar.
Digniin! Kalanchoe Degremona waa in lagu qasi karaa ujeedooyinka daawooyinka, ma aha wax aan la qiyaasi karin oo ah qiyaasta warshadaha, iyada oo adeegsanaysa casiir sida qalabka cayriin ee daawooyinka.
Maanta, nooca ugu jecel ee growers ubax - Kalanchoe Kalandiva. Warshadani waxay u dhigantaa ilaa 30 cm oo dheer caleemo casri ah iyo ubaxyo si cajiib ah u qurux badan.
Ubaxyada Terry ee soodhadhyo kala duwan oo la duubo midabada dhaadheer ee Kalanchoe. Muddada ubaxu waxay socotaa ilaa lix bilood. Ubaxyada qaarkood ubaxyada, ubaxyada kale. Kalanchoe Kalandiva oo aan qabin wax daryeel ah.
Waddada caleemahaas waa Hindiya. Warshadu waxay gaartaa ilaa 60 cm oo dherer ah. Leaves - kuuska oo leh ilko, cagaar iftiin ah, qorraxda qorraxda ku beddela midab casaan ah.
Kalanchoe weyn oo ubax leh isaga qudhiisu wuu hadlaa: bishii May, dhirta ubaxyada ubaxyada leh ubaxyo huruud ah oo leh tubbo-qaabeeya corolla ah, tufaaxyadooda waa kuwo ballaadhan, oo aad u sarreeya. Waxaa lagu hayn karaa xaaladaha qaboobaha waxayna ku raaxeysan karaan caraf udgoon oo jilicsan.
Kalanchoe Mangina ama Manzinisida badan leh - tani waa noocyo kala duwan. Waxay la mid tahay qaabka Blossfeld ka baxo, laakiin waxay ku kala duwan tahay ubaxyo waaweyn oo waaweyn-oo ah midabka casaan.
Geedka ubaxyada guga iyo blooms sanadka oo dhan. Florists, ururinta walxaha ka joojinta, door bidaan noocyada kala duwan.
Dalku, waxay ku koraan buuraha Itoobiya. Buulooyinkan waxay koraan illaa 50 cm, caleemuhu way dheer yihiin ilaa 12 cm, qaabkoodu wuxuu u eg yahay ukun, cidhiidhi galka saldhigga. On cidhib ah caleemaha waxaa jira jajab iyo ilkaha. Caleemaha waxay leeyihiin midab xiiso leh: dhalinyaro - cagaaran, ka dibna labada dhinac ee cawliga leh leh dhibco bunni ama lilac ah.
Kalanchoe Blooms ee January-April. Ubaxa waa cadaanyo leh dhererka dheer ee ilaa 8 cm, tufaax, iyo sidoo kale caleemo, waa ukun qaabeeya. Noocan Kalanchoe wuxuu dareemayaa fiicnaan qolka qabow.
Kalanchoe Pinnate ama Briofillum (Giriigga - caleemaha caleemaha) wuxuu koraa ilaa hal mitir iyo nus ah duur joogta. Meesha uu ku dhashay waa Madagascar. Waxay leedahay stem xoog leh, caleemaha waa qaro weyn, oo leh finjo, meel u dhow midba midka kale.
Noocaan Tani waxay Blooms sanadka labaad ee dhamaadka qaboobaha ama horraanta gu'ga, laakiin ma ubaxaan sanadkiiba. Duufaantu waa argagax weyn, ubaxu waa cagaar iftiin leh oo leh jilicsan.
Caleemaha sare iyo kan hoose ee noocyada noocaan ahi way kala duwanyihiin: kuwa sare waxay leeyihiin muuqaal ukun ah, kuwa hoose waxay ka mid yihiin qaabka oval, qaar ka mid ah caleemaha Kalanchoe pinnate waa elliptical. Markaad guriga ku korodho, ubaxadu waxay noqonayaan leben casaan.
Kalanchoe waa la iska daayay
Magaca labaad waa "Geesaha deerada"Waxa ay lakulantay caleemo cagaaran oo cagaaran illaa 10 cm oo dherer ah Qalalaasaha ayaa kora ilaa 50 cm.
Kalanchoe "Deer Horns" marar dhoobo, blooms-ka waa jaalaha. Warshad waxaa lagu qiimeeyaa caleemo aan caadi ahayn, marka lagu daro, ma aha mid madaxbannaan ee daryeelka, xaaladda ugu weyn ee koritaanka - iftiin wanaagsan. Noocadani ma laha sifooyin caafimaad.
Plant dhejiya rosette. Ha Kalanchoe Sensepala caleemo adag oo adag. Dhinacyada caleemaha caleemuhu waxay leeyihiin ilko, waxay leeyihiin dusha sawir, dhererka caleemaha ilaa 20 cm.
Noocaankan waxaa lagu gartaa mid aan caadi ahayn. Iyada oo leh burooyinkeeda burooyinkeeda, dhirta wuxuu koraa 70 cm dhawr bilood.Haddii caleemaha la gooyo, ubaxu wuxuu soo kabanayaa dhowr bilood.
Ma taqaanaa? Sharaxaadda Kalanchoe Sensepal waxay la yaabtay Goethe si aad u badan oo uu ku celcelinayay aayaadka geedkaan.
Kalanchoe Hilderbranta koraan on jirid toos ah ilaa 40 cm ee height. Waxay leedahay caleemo lacag ah oo leh xuduud khafiif ah oo caleen ah oo ku wareegsan geeska.
Dhamaan caleemaha waa ay ku adag yihiin taabashada waxayna ku daboolan yihiin tuubbo khafiif ah. Qaababka caleemaha waxaa lagu soo koobay foorno loo fidiyey ilaa geeska. Nasiib darro, wakiilkaan ee caleenta Kalanchoe wax yar ayaa loo yaqaan bannaanka.
Xiiso leh In Latin America, juice of Kalanchoe sii kordhaya waxaa ku darayaa casiir iyo waxaa loo isticmaalaa sida contraceptive.
Sharraxaadda Kalanchoe maaha, dabcan, waxay siiyaan sawir dhammaystiran oo ah quruxda iyo qalafsanaanta geedkaan. Laakiin dad badan ayaa doonaya inay ninkan qurux badan ku helaan daaqadahooda, gaar ahaan maaddaama ay suuqyada waxtarka leh si fiican loo yaqaan.